स्वेटर - को व्यापक विकास उद्देश्य छ कि एक व्यायाम फिर्ता मांसपेशिहरु। साथै, यो राम्रो thorax को मात्रा मा छाती र बढ्छ तल्लो भाग द्वारा coached छ। राहत र तल्लो को राम्रो आकार दिन प्रयोग व्यायाम स्वेटर छाती मांसपेशी।
त्यहाँ चलिरहेको स्वेटर दुई तरिकाहरू छन्:
1 एक पीठ आवास मा झूट बोल्नु।
2. पीठ मात्र shrug मा झूट बोल्नु।
पहिलो विधि मा घुँडा संग झुकन द्वारा शरीर भन्दा झूठ गर्नुपर्छ। खुट्टा भुइँमा विरुद्ध दृढ राख्न। एक डम्बबेलनेबुला लिन र छाती भन्दा उचाल्न सही को हातमा। दुवै हात एक डम्बबेलनेबुला पकड माथिल्लो डिस्क तल बाट हुनुपर्छ। को कोहनी आफ्नो हतियार झुकन बिना, आफ्नो टाउको भन्दा एक चाप मा फलाम को दंड कम। स्वेटर - के तपाईं बिस्तारै, प्रदर्शन गर्न महसुस गर्न pectoral मांसपेशीमा र कसरी फैलयो चाहिन्छ भनेर एउटा व्यायाम छाती।
डम्बबेलनेबुला कम बिन्दु गर्न ड्रप पछि, यो यसको मूल स्थिति यसलाई फिर्ता उठाउनु आवश्यक छ। को कचौरा उठाइएको छैन निश्चित गर्नुहोस्। स्वेटर - ठीक गर्नुपर्छ भनेर एक व्यायाम: यदि कम श्रोणि को छाती महत्वपूर्ण खण्डका प्रदान गर्दछ।
प्रदर्शन स्वेटर सीधा हतियार: त व्यायाम को प्रभाव अधिकतम हुनेछ। यो आन्दोलन केवल काँध संयुक्त मा उत्पन्न गर्नुपर्छ। शरीर बाँकी गतिहीन रहनेछ। तपाईं स्वेटर र नतमस्तक प्रदर्शन गर्न सक्छन्, तर यो मामला मा मांसपेशीमा र छाती देखापर्ने छैन को मात्रा वृद्धि मात्र तालिम हुनेछ।
दोस्रो विधि घुँडा मा बाङ्गो भएको खुट्टा भुइँमा पूर्ण खुट्टा हो कि आवश्यक छ, र शरीर को पीठ मा मात्र काँध छ। यो स्थिति मा खेलाडी काम गर्न सम्भव बनाउँछ को latissimus dorsi र कम pectoral मांसपेशीमा। यो पहिलो विधि मिल्दोजुल्दो छ। स्वेटर - तेजी देखि छाती फैलिएको एक व्यायाम। विशेष गरी यसको मात्रा वृद्धि गर्न सक्रिय तरिका सिफारिस गरिएको।
अनुभवी bodybuilders को स्वेटर को छाती को मात्रा वृद्धि, युवा खेलाडीहरूलाई मात्र होइन तर पनि पुरानो पुस्ता को प्रतिनिधिहरु गर्न मद्दत गर्नेछ दाबी गर्छन्। यो केवल यस्तो zhimom बारहरू, dumbbells ताराहरु अन्य व्यायाम, संग एकान्तरण, नियमित बाहिर गर्नुपर्छ।
यसलाई, प्रयोग ले तपाईं को लागि सही छ जो विधि सोचिरहनुभएको आवश्यक छ। केही स्वेटर को पीठ मा सबै भन्दा झूट प्रदर्शन। केही पल्टिने, तर आफ्नो शिर पीठ को किनारा भन्दा हङ।
आफ्नो लक्ष्य भने - पछिल्लो पुनरावृत्ति (15 प्रेस सिफारिस गरिएको) ठूलो कठिनाई संग भेट्नुपर्छ गर्न प्रदर्शन गर्न रूपमा त छाती को मात्रा वृद्धि गर्न, dumbbells को वजन रोज्नुहोस्। चोट को slightest शङ्काको मा, कार्यान्वयन स्वेटर रोक्नु पर्दछ। यसलाई कम वजन र अधिक पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या काम गर्न राम्रो छ किनभने तुरुन्तै, एक ठूलो वजन पछि Chase छैन। पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या संख्या धेरै हप्ता भन्दा phased गर्नुपर्छ बढाउनुहोस्।
तपाईं अझै पनि भारी वजन काम गर्न सुरु विशेष गरी यदि स्तन, बलियो पर्याप्त चोट हुनेछ हुन तयार हुनुहोस्। पालना स्वेटर - तपाईं एउटा सुन्दर विशाल छाती खरिद गर्न मद्दत गर्नेछ एक व्यायाम!
के मिन्स्क जिमहरू मा? समीक्षा
शारीरिक प्रशिक्षण। यसको सुविधा र लाभ
GPA - यो के हो? सल्लाहकार GPA: जिम्मेवारी विशेष गरी काम। विषयगत योजना GPA
हँसिलो budgies चटपटाउनु। सेक्स कसरी निर्धारण गर्ने?
उज्बेकिस्तान मा यात्रा। Namangan - देश को सबै भन्दा होनहार शहर को एक
खुबानी देखि मुरब्बा: तस्बिर संग व्यञ्जनहरु। multivarka मा खुबानी देखि मुरब्बा। को जाडो लागि खुबानी देखि मुरब्बा
एल ई डी जडान। के छरितो हुन सक्छ?